Hay’adda Lacagta Adduunka oo shaacisay inay Soomaaliya buuxisay shuruudihii deyn Cafinta (Warbixin) - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Hay’adda Lacagta Adduunka oo shaacisay inay Soomaaliya buuxisay shuruudihii deyn Cafinta (Warbixin)
Hay’adda Lacagta Adduunka oo shaacisay inay Soomaaliya buuxisay shuruudihii deyn Cafinta (Warbixin)
Warbixin ay soo saartay hay’adda lacagta adduunka ee (IMF) ayay ku sheegtay in dowladda Soomaaliya ay buuxisay dhammaan 27-kii shuruudood oo uu Sanduuqa Caalamiga ah ee Lacagta Adduunka (IMF) ku xiray iney buuxiso si deymaha lagu leeyahay looga cafiyo Soomaaliya.
Kadib shir dhowr cisho uga socday magaalada Nairobi ee dalka Kenya uga socday Wasiirka Maaliyadda iyo IMF ayaa qeyb ka ahaa shir sedexdii biloodba mar la qabto,kaasi oo lagu qiimeeyo waxyaabaha u qabsoomay dowladda Soomaaliya gaar ahaan qorshaha horumarinta hanaanka maamul maaliyadeed ee dalka iyo dadaalka deyn cafinta iyo daabacaadda lacago cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay waxbadan uga qabsoomeen talaabooyinkii lagu qiimeynayay,islamarkaana ay deeq bixiyaasha caalamku ay soo dhaweynayaan,sidoo kale waxaa loogu baaqay dowladda Soomaaliya in ay sii wadaan dadaalkeeda ku aadan arrimaha horumarinta maamulka iyo siyaasadda dhaqaalaha dalka.
“Mas’uuliyiinta Soomaaliya waxay dhisteen rikoodh wanaagsan oo siyaasadeed iyo dib-u-habeyn lagu sameeynayo,Hawlaha dhaqaalaha ayaa si tartiib ah dib uga soo kabanaya mudadii u dhaxeysey 2016-17-kii .
“Sannadka 2018, kobaca ayaa la saadaalinayaa inuu soo kabsado 3.1 boqolkiiba 2.3 boqolkiiba iyo sicir bararka si loo yareeyo 3.5 boqolkiiba, hoos udhaca 5.3 boqolkiiba sannadka 2017,Waxqabadka maaliyadeed illaa July wuxuu ahaa mid xooggan,Tani waxay keentay uruurinta dakhliga gudaha taas oo inta badan ka dhigtay lacag bixinta qadarka ah ee deeqda”. Ayaa lagu yiri qoraal ay soo saartay hay’adda lacagta Adduunka ee (IMF).
Sidoo kale Hay’adda lacagta adduunka ee IMF ayaa qoraalkan ay ka soo saartay shirka lagu qiimeynayay dadaalka ay wado dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri.
“Inta lagu guda jiray booqashada, kooxda(IMF) ayaa magaalada Nairobi kula kulmay Wasiirka Maaliyadda, Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle Guddoomiyaha Bankiga Dhexe, Mudane Bashir Issa Cali iyo mas’uuliyiin kale.
“Kooxdu waxay sidoo kale la kulantay wakiillo ka socda deeq bixiyeyaasha labada dhinac iyo kuwo badan oo ka socda Nairobi si ay u taageeraan dadaallada xukuumadda ee ah in ay kor u qaadaan maalgelinta Wajiga I ee dib-u-habeynta lacagaha, iyaga oo cusbooneysiinaya waxqabadka hoosta SMP, iyo in ay isku duwayaan dadaallada waxqabadka dhismaha”.
“Sidoo kale Kooxda ka socotay(IMF) waxay ka mahadcelineysaa wadahadalka furan oo cad oo lala yeesho mas’uuliyiintan,waxayna mahadnaq u tahay macluumaadka loo diyaariyay shaqaalaha, Wadahadaladu waxay sidoo kale xoojiyeen,Qodobka IV-aad ee Wadatashiga kaas oo lagu darayo dib-u-eegista ugu horreysa ee hoos timaada SMP III, oo la qorsheeyey November / December 2018”. Ayaa lagu yiri sidoo kale qoraalkani.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ay xooga saaraysay arrimo ay kamid yihiin horumarinta hanaanka maamul maaliyadeed ee dalka,qorshaha deymaha looga cafinayo Soomaaliya iyo sidii loo soo daabici lahaa lacago cusub oo shilin Soomaali ah,iyadoo dhowr jeer oo hore ay dowladdu buuxisay shuruudo ay ku xireen Deeq bixiyaasha caalamka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo Soomaaliya uga qeyb galaya Shirka Golaha Guud ee Q/Midoobay
Sidee Kenya uga falcelisay go’aankii ICJ ka qaadatayb dalabkooda?
Q.M oo xil u magacawday ku xigeenkii James Swan